Ekwentị kwalite na-smart ekwentị, anyị nwere ike ike okpu agha na-smart okpu agha na chọrọ ọrụ ， ọ bụghị nanị na-enye mmetụta nchedo ma na-eme ka okpu agha mmekọrịta ahụmahụ.
Anyị nwere ọkachamara n'ibu injinia, electronic engineer, software engineer.
Injinia na-arụzi ọrụ, injinia Eletronic na injinia sọftụwia enweghị ọrụ na ijikọ ọkụ ọkụ LED / COB, Accelerometer na ihe mmetụta nwere okpu agha na ọkwa imewe iji hụ ọkụ ọkụ ọkụ kwesịrị ekwesị, bọọdụ PCB, waya, batrị na onye na-agbanwe ihe dịpụrụ adịpụ. Na mgbakwunye, gbasoro ụzọ okpu agha ụzọ okpu agha, ule ụlọ, asambodo, rụọ ọrụ na ikanam ikanam ikanam / COB, mmemme iOS ma ọ bụ Andorid APP, nyocha na ịchọpụta chinchi, ngwa mwepụta.
Mkpụrụ osisi na Board (COB) na-enye ohere ka akara ụkwụ dị mkpirikpi ka ị na-ewepụta oke ọkụ ma na-enye ìhè ahụ ka anya.
Anyị ga-enye ọrụ ọrụ mkpuchi okpu agha niile, OEM na ODM ahaziri, arụ ọrụ helemt ahaziri, ahaziri CMT.
Usoro mmepe ngwa kewara uzo asaa ndi ozo:
Site na mmalite nke ụlọ ọrụ ahụ iji nweta ụlọ ọrụ ekwentị, ọkwa a malitere. Ọ bụkarị onye njikwa azụmaahịa nke ụlọ ọrụ na-ejikọ na ụlọ ọrụ ahụ. Dabere na ahụmịhe nke ha, onye njikwa azụmaahịa ahụ, mgbe edepụtara nke mbido, chịkọtara otu ụdị APP ụlọ ọrụ kwesịrị ịzụlite, ma enwere ihe pụrụ iche chọrọ yana wdg. Gwa ụlọ ọrụ ahụ na onye njikwa ngwaahịa ya kwekọrọ na nhazi ahụ.
2. Ebe nkwurita okwu
Onye njikwa ngwaahịa kwesịrị ịrụ ọrụ nke akwa na nke a, wee mee mkparịta ụka onye ọrụ, nyocha nyocha yana nyocha nke ọma. Kedu ụdị ngwa ụlọ ọrụ ahụ chọrọ ịme, ụdị ọrụ ngwa a chọrọ ịghọta, ụdị ụdị ngwa ahụ chọrọ n'ozuzu ya, yana usoro sistemụ nke ngwa ahụ chọrọ ka ọ gbanwee. Mgbe nkwukọrịta usoro na mkpokọta, a na-enyefe ya ndị ọrụ nyocha maka mmejuputa ya. Ndị ụlọ ọrụ na-ebuli mmemme mmepe ngwa ha oge niile site na nkwukọrịta.
3. Mmekọrịta imewe ogbo
N'oge a, ụlọ ọrụ ahụ ekpebiela atụmatụ nke ngwa, ma banyela nhazi imewe. Usoro nhazi ahụ gụnyere: usoro topology, nhazi mmekọrịta mmekọrịta, usoro nnwale nnwale dị elu na inye atụmatụ mmekọrịta. Uche bu ihe doro anya nke onwe ya, nke nwere ihe adighi ama ama. Ya mere, na usoro nhazi, anyị ekwesịghị iche naanị ụdị ụlọ ọrụ ahụ, kamakwa ịnakwere ndị na-ege ntị. Akụkụ abụọ a ruru nguzozi, mepụta mbido mbido nke maapụ ahụ, dịka nsonaazụ akọwapụtara nke nkwukọrịta na ụlọ ọrụ maka mgbanwe nke abụọ, ma mesịa gosipụta eserese ngosi na onye ahịa.
4. Visual okike ogbo
N'uhuruchi nke okike, ụlọ ọrụ anyị na-ebido site na iji nghọta were guzobe usoro izizi na nghazi nke okike. Ọzọ, anyị ga-enye ndị ọrụ ọrụ okike, ntanetị peeji, nkọwapụta ihe na ihe ndị ọzọ. Mgbe etinyere ụlọ ọrụ ahụ, a ga-etinye ihe okike na njikọ ọzọ.
5. N'ihu njedebe mmepụta ogbo
Isi ọrụ nke ọkwa a bụ imepụta UI ma ghọta mmekọrịta n'ihu-ihu na ibe ahụ na asụsụ ederede Java. Ọ gụnyere: nkọwapụta nzuzo, ntinye peeji na nesting teknụzụ, ndakọrịta sistemụ, nyocha otu, mmezi ahụhụ.
6. Nkà na ụzụ mmepe.
Mgbe ị na-abanye na mmepe, nhọrọ mbụ bụ iji nyochaa ọrụ ahụ n'onwe ya, ma mee mkpebi mbido na oge R & D, oge nnwale na oge ịhapụ oge. Mgbe ahụ ọ bụ imebi ọrụ ma kwadebe maka mmepe, dịka usoro nzuzo - ntinye usoro - nyocha usoro - mmezi ahụhụ - nnyefe. Mmepe mmepe kwesịrị iji ndidi chere maka ọrụ ahụ.
7. Ndị ahịa nabatara ọkwa
Mgbe emechara mmemme ahụ, ọ ga-echere ka ndị ọkachamara nyocha wee nwalee, yana ọdịnaya nnwale ahụ gụnyere arụmọrụ ngwa, ọrụ, ọdịnaya, wdg. Ọ bụrụ na enweghị ahụhụ na ule ahụ, mgbe ahụ enwere ike ịnabata ya. Ọrụ ndị dị na ngwa ntanetị ga-abụ ihe na-agwụ ike, na ụlọ ọrụ ndị ọzọ kwesịrị ịkwado. Emepụtara ngwa kwesịrị-enyocha mgbe ọ na-ulo oru na onye ọ bụla n'elu ikpo okwu
iOS APP na gam akporo APP.
Customerized ikanam / COB Light Display
Na-akpụzi Ihe Nrịba Ama.
Njikwa Remote Bluetooth.
Ihe mmetụta Lighting & Crash Sensor.